Peter Lwin | Calvary Burmese Church
Author: Peter Lwin
January 23, 2017 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus: Calvary Burmese Church, January 22, 2017 by Pastor Awi Khawmhuai Tunngo
December 23, 2015 December 23, 2015 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
အချိန်ကား ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ အရိုးခိုက်အောင် အေးသည့် ခရစ္စမတ် အကြိုည၊ တောင်မြောက် ပြည်တွင်းစစ် ကြောင့် ကိုးရီးယား တစ်နိုင်ငံလုံး စစ်ရှောင် ဒုက္ခသည် များအဖြစ် ပြေးလွှား ပုန်းခို နေရသည့် အချိန်။ ငယ်ရွယ် နုပျိုဟန် ရှိသော နေ့စေ့ လစေ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင် တစ်ယောက်၊ ရုတ်တရက် ဗိုက်နာ သောကြောင့် တွေ့သမျှ လူတိုင်းကို အော်ဟစ် ကာ အကူအညီတောင်းခံ နေသည်။ Continue reading →
August 3, 2015 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
July 28, 2015 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
July 28, 2015 July 28, 2015 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
July 14, 2015 July 14, 2015 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
May 15, 2015 May 15, 2015 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
April 7, 2015 April 7, 2015 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
Pianist U Soe Moe – There isafountain filled with blood…
April 7, 2015 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
Easter Sermon by Rev.Dr. Saw Ler Htoo on April 5, 2015….
April 3, 2015 April 3, 2015 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
Palm Sunday Message by Sayama Awi Khawm Huai on March 29, 2015 Continue reading →
Message by Youth Pastor Peter Myint Lwin on March 15, 2015 Continue reading →
Message – Sayama Marlene – March 8, 2015
April 3, 2015 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
Message by Sayama Marlene on March 8, 2015 Continue reading →
ပျောက်သောသား – The Prodigal Son
February 15, 2015: အကြင်နာ မေတ္တာ ကရုဏာ ဆိုတဲ့ အရာကို လူတိုင်း ခံစားချင် ကြတယ်။ လူမပြောနဲ့ တိရိစ္ဆာတောင်မှ တစ်ကောင်နဲ့ တစ်ကောင် ကြင်နာတတ်တဲ့ စိတ်၊ ကြင်နာတတ်တဲ့ အမူအရာ၊ ကြင်နာတတ်တဲ့ အကြည့် ကလေးတွေ ရှိတယ် ဆိုတာကို တွေ့ရတယ်…
နောင်တရကြလော့ – Sayama Hkawn Ja Nahpaw
February 23, 2015 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ရှင်မသဲခရစ်ဝင် ကိုကြည့်လျှင် သခင်ယေရှုရဲ့ ပထမဦးဆုံး Public Sermon မှာ ပထမဆုံး ဟောတဲ့တရား ရဲ့ အဓိကဟာ နောင်တရ ကြပါဆိုတဲ့ အရာကို တွေ့ရတယ်…ဒါတင်မက နှစ်ခြင်းဆရာ ဗတ္တိဇ့ဆရာ ယောဟန် ကလည်း နောင်တရဖို့ ဟောဒါကို တွေ့ရတယ်….
ကာလအချိန်တန်ပြီ – Rev. Thangvella
Jan 25, 2015: လောကကြီးကို တစေ့တစောင်း ကြည့်လိုက်ရင်၊ သတင်းစာဖတ်မလား၊ TV ကြည့်မလား၊ Internet ၀င်မလား။ Continue reading →
Now is The Hour – Rev. Dr. Saw Ler Htoo
February 10, 2015 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
Jan 11, 2015 ရက်နေ့တွင် ဝေငှသော ဆရာ စောလယ်ထူး ၏တရားဒေသနာ “ယခု အချိန်ရောက်ပြီ” Continue reading →
ကျွန်ုပ်၏လုံခြုံသောခိုလှုံရာ A Save Place to Refuge For Me
December 1, 2014 December 1, 2014 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
September 21, 2014: Sayama Naomi Kam’s message…
November 19, 2014 December 1, 2014 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
တစ်ချိန်တုန်းက ကောင်းကင် ကြိုးလမ်းလျှောက်သမား တစ်ယောက်သည် Niagara ရေတံခွန်၏ အမေရိကန် နိုင်ငံ ခြမ်းဖက်မှ တစ်ဖက် ကနေဒါနိုင်ငံဖက်သို့ သံကြိုးရှည် တစ်ချောင်းသွယ်ပြီး Continue reading →
October 7, 2014 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
September 11, 2014: Testimony Continue reading →
September 7, 2014: Saya Saw Min Lwin’s Continue reading →
Rev. Thang Vella on Bible Sunday
September 9, 2014 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
August 10, 2014: Rev. Thang Vella’s Continue reading →
Saya Phillips Ahone in CBC
July 27, 2014: Rev. Ahone’s Continue reading →
Saya Than Zaw Moe
July 13, 2014, Saya Than Zaw Moe Continue reading →
Yadana Oo – Jundson Sunday
July 13, 2014: Yadana Oo on Judson Sunday, Continue reading →
Saya Zaw Thu Lin at CBC
June 27, 2014 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
June 15, 2014: Saya Zaw Thu Lin’s Continue reading →
MD Home Cell – Rev. Zaw Thu Lin
June 17, 2014 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
June 13, 2014: Rev. Zaw Thu Lin’s Bible study Continue reading →
Saya Zaw Thu Lin at CBC Home Cell
June 11, 2014 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
June 6, 2014: Bible study with Saya Zaw Thu Lin, Continue reading →